कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् बैशाख २८ गतेको राशिफल « Dhankuta Khabar
कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् बैशाख २८ गतेको राशिफल
आज श्री शाके १९४१ बि.स. २०७६ साल बैशाख २८ गते शनिबार इश्वी सन् २०१९ मे ११ तारीख वैशाख शुक्लपक्ष सप्तमी तिथी तिष्य नक्षत्र गण्ड योग गर करण चन्द्रमा कर्कट राशीमा आनन्दादि योगमा मित्र योग सुर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु गंगासप्तमी गंगोत्पत्ति – ज्योपं. सरोज घिमिरे / धनकुटा खबर
शारीरिक आलस्यले गर्दा सामान्य कार्यक्षेत्रमा ढिलाई हुन सक्छ । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने छ । मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । प्रिय मित्रजनह? बिचको भेटघाट ले मन प्रशन्न रहला ।
शुभचिन्तकको साथ सहयोग द्वारा कार्य सम्पादनमा सहज हुनेछ । रोकिएका रहेका कामह? बन्नेछ । पुरानो कार्य क्षेत्रमा मन चन्चल रहनाले नयाँ काम को थालनि हुन सक्नेछ । मित्र ह?को साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
पारीवारिक भेटघाटको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । दाम्पत्य सम्बन्धमा भने खटपट रहला । स्वास्थ सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउनेछ । आय आम्दानिका बिभिन्न श्रोतह? फेला पर्नेछन ।
मानसिक चिन्ताले सताउनेछ । आँट शाहसमा कमि आउनाले कार्यसम्पादनमा समस्या आउन सक्छ । अधुरो यात्रा रहने योग रहेकोछ । अ?को छिटो बिश्वास गर्नाले सामान्य धोकामा परिएला । नयाँ कार्यको थालनि नगनू होला ।
दिदी बहिनीह?को साथ सहयोगले दीगो फाईदा हुने कार्यको थालनि होला । आक्स्मिक धनलाभको सम्भाबना रहेको छ । बौधिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउला ।
बिश्वासिलो ब्यक्तिह?बाट धोका हुन सक्ला । तपाईको कार्य बाट फाईदा लिनेह?को सङख्यामा बृद्यि हुनेछ । नया कार्य थालनि गर्ने अबसरह? प्राप्त हुनेछन । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश रहनछ ।
कार्यक्षेत्रमा प्रतिस्पधिह?को बृद्यिहुनाले तपाईलाई सामान्य झन्झट आईपर्ला निर्णय गर्न नसक्नाले आफ्नो कमजोरी महसुस हुनेछ । अ?को संगतगर्ने बानिले सामान्य समस्या आइपर्ला । कसैको बिश्वास नगरेकै बेश हुनेछ ।
पठनपाठनको निम्ति समय राम्रो रहेको छ । गरिरहेको कार्य क्षेत्रमा मन चन्चल रहनाले अ? नयाँ काम को थालनि हुन सक्नेछ । बौधिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला । आम्दानिका बिभिन्न स्रोत ह? फेला पर्ने छन ।